Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseFransi ezaphulayo » Ikopi eneminyaka engama-400 ubudala yeMona Lisa iza kuthengiswa eParis
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • Iindaba zeLuxury • iindaba • abantu • Shopping • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Ikopi eneminyaka engama-400 ubudala yeMona Lisa iza kuthengiswa eParis.
Ikopi kaMona Lisa eya kuthengiswa eParis iyafana neyokuqala kangangokuba kusenokwenzeka ukuba umzobi wayenokufikelela ngokusondeleyo kwinguqulelo kaLeonardo.
Ikopi yenkulungwane ye-17 ka-Leonardo da Vinci odumileyo uMona Lisa isiya kwibhloko yefandesi yaseParis.
Ikopi eyoyikisayo yomsebenzi wobugcisa ka-da Vinci kulindeleke ukuba ithathe i-150,000-200,000 yee-euro.
Enye ikopi yenkulungwane ye-17 ye-Mona Lisa ithengiswa nge-2.9 yezigidi zee-euro ngoJuni eChristie's eParis.
Indlu yefandesi yeArtcurial eParis, eFransi yabhengeza ukuba ikopi kaLeonardo da Vinci Mona Lisa dating ukusuka emhlabeni 1600 iya kuthengiswa ngoLwesibini.
Ikopi ethembekileyo yomzobo wobugcisa ka-da Vinci osusela kwiminyaka engaphezu kwama-400 eyadlulayo iya kungena phantsi kwehamile kwiinyanga nje ezimbalwa emva kokuphinda kuveliswe enye yezona peyinti zibalaseleyo zehlabathi ezithengiswa ngexabiso lerekhodi.
I-original kaLeonardo da Vinci, eyathengwa nguKumkani waseFransi uFrancois I kumzobi ngo-1518, iboniswe eParis. Imyuziyam yaseLouvre kwaye ayithengiswa.
Mona Lisa's ikopi iseti ukuba ithengiswe eParis iyafana neyoqobo kangangokuba kusenokwenzeka ukuba igcisa linofikelelo olusondeleyo kuguqulelo lukaLeonardo, indlu yefandesi yeArtcurial yatsho.
"UMona Lisa ngoyena mfazi umhle kwipeyinti," ingcaphephe yendlu yefandesi yeArtcurial kunye nefandesi, uMatthieu Fournier, utshilo njengoko umzobo wawuboniswa esidlangalaleni ngaphambi kokuthengisa.
Wonke umntu ufuna ukuba nohlobo olukumgangatho ophezulu weMona Lisa.
Ikopi kulindeleke ukuba ithathe i-euro eyi-150,000-200,000 (i-$173,000-$230,000).
NgoJuni ophelileyo, umqokeleli waseYurophu uthenge enye ikopi yenkulungwane ye-17 Mona Lisa nge-2.9 yezigidi zee-euro (i-3.35 yezigidi zeedola), irekhodi lokuphinda ukuveliswa komsebenzi, kwifandesi eChristie's eParis.
Kwaye ngo-2017, uChristie's New York wathengisa iSalvator Mundi kaLeonardo da Vinci ngerekhodi-lophula i-450 yezigidi zeedola.